मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन : पूर्वमन्त्री पण्डित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन : पूर्वमन्त्री पण्डित
फाल्गुन ८, २०७६ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितले सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनु पर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दैपूर्वमन्त्री पण्डितले प्रश्न उठिसकेको सन्दर्भमा बाँस्कोटासमक्ष राजीनामा दिएरसेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको विकल्पनरहेको बताएका छन् ।
‘अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ, दोषी भए कारबाही भोग्नुपर्छ । प्रश्न उठिसकेको अवस्थामाराजीनामा दिएर अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउनुपर्छ,’ पण्डितले भने, ‘प्रश्न उठिसकेको सन्दर्भमा सबैभन्दा राम्रो राजीनामा दिएरकारबाहीको प्रक्रियालाई स्वच्छता र निष्पक्ष्ताको लागि कसीमा उभिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको कुरा सुन्ननचाहने र कहीँ कतै भ्रष्टाचारका कुरा आए कडाइका साथ कारबाही गर्ने अभिव्यक्तिदिइरहेका बेला सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्नुकोविकल्प नभएको पण्डितले बताए ।
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा प्राप्त हुने कमिसनसम्बन्धी विवादमा मुछिएका हुन् । लेखा समितिमा छानबिनका क्रममा रहेको विषयसँग सम्बन्धित अडियो बुधबार सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ १४:५१
बाँस्कोटाको ‘अडियो सार्वजनिक प्रकरण’मा अर्थमन्‍त्रीले भने- 'छानबिन होला नि !'
काठमाडौँ — अर्थमन्‍त्री युवराज खतिवडाले सञ्‍चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणबारे छानबिन हुने बताएका छन् । संसद्‍ भवन नयाँ बानेश्‍वर परिसरमा सञ्‍चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले यो सबैको चासोको विषय भएकोले छानबिन हुने संकेत दिएका हुन् । 'बाहिर आएका कुरा कति सत्य हुन्, कति असत्य हुन् छानबिन होला नि !'
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्‍त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा जोडिएको विषय छानबिन हुन्छ त ? भन्‍ने सञ्‍चारकर्मीको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'लेखा समितिलाई पनि आरोपित गरिएको छ । अहिलै प्रारम्भिक तहमा केही कुरा बाहिर आयो भन्दैमा कुनै धारणा बनाइहाल्नु उचित हुँदैन । यो सार्वजनिक चासोको विषय भइसकेको छ ।'
स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश शर्मा मिश्रसँग मोलमोलाइ गरेको अडियो बुधबार सार्वजनिक भएको थियो । विभिन्‍न डिजिटल प्ल्याटफर्ममा घूसको अडियो र त्यसक्रममा गरिएको संवादको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सञ्‍चारमन्‍त्री बाँस्कोटाको उपस्थिति सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियासम्ब‍न्धमा छलफल गरिने कार्यसूची थियो ।
मन्‍त्री बाँस्कोटा समिति बैठकमा सहभागी नभइ सुदूरपश्च‍िम प्रदेश पुगेका थिए । पछि लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ १४:३१